Sanad-guurada 31aad ee xornimada Somaliland oo si weyn looga xusay Dalka. |
Sanad-guurada 31aad ee xornimada Somaliland oo si weyn looga xusay Dalka.
Somaliland ayaa looga dabaaldegayaa xuska sanad guurada 31 aad ee ka soo wareegtay markii ay xornimdeeda kala soo noqotay Israacii Soomaaliya 1991-kii, waxaanay malaayiin qof oo gudaha iyo dalka ku kala nooli maamusayaan maalinta 18 May oo ku beegan markii madaxbanaanida jamhuuriyadda laga dhawaaqay magaalada Burco ee xarunta gobolka togdheer, halkaasoo lagu qabtay shirweynihii ugu horeeyey ee masiiri ah ee ay yeesheen odayaashii waxgaradka ahaa iyo xooggaagii SNM.
Munaasibadaha xuska 18 May oo lagu qabtay guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka, ayaa waxa kala qaybgalay madaxda hay’addaha dawladda ee kala duwan ee heer qaran, heer gobol iyo mid degmo.sidoo kale hogaamiyeyaasha asxaabta qaranka ayaa xafladaha dabaal-degga ka qaybgalay.
Munaasibada ugu weyn ee xuska 18 May oo lagu qabtay magaalada Hargeysa, gaar ahaan fagaaraha Khayriyada, ayaa waxa ka qaybgalay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxda goleyaasha baarlamanka, garsoorka iyo hay’addaha fulinta.
Ciidamada kala qalabka sida ee Milateriga, Booliska, Asluubta iyo kuwa kale ee amaanka oo ay weheliyaan Ardayda dugsiyada waxbarashada, Ururrada Bulshada iyo qaybaha kale ee dadweynaha ayaa socod dhoola-tus ah ku maray jidka wadnaha ee magaalada Hargeysa.
Sidoo kale munaasibado aad loo abaabulay, oo lagu muujiyey shucuur waddaniyaddeed ayaa lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee gobolada.